नगद कारोबारलाई डिजिटलमा लैजाने उपयुक्त अवसर «
नगद कारोबारलाई डिजिटलमा लैजाने उपयुक्त अवसर
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ई–सेवा फोनपे प्रालि
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले देशैभर गरेको लकडाउनका बेला सबैभन्दा ठूलो बहसमा आएको विषय हो– डिजिटल भुक्तानी । भौतिक र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भन्दै डिजिटल भुक्तानीमा नियामक, सेवाप्रदायक र सेवाग्राही तीनैपक्ष आकर्षित भए पनि यसले उल्लेख्य गति लिन भने सकेको छैैन । नेपालको डिजिटल भुक्तानी सेवाको क्षेत्रमा पायोनियर कम्पनी मानिएको ई–सेवाको भने यस क्षेत्रमा अझै धेरै गर्न सकिने अवस्था भए पनि नीतिगत झमेलाका कारण यो क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मार्न नसकिरहेको अनुभव छ । सन् २०१० देखि यस कम्पनीमा आबद्ध सुभाष सापकोटा अध्ययनले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । एक दशकदेखि ई–सेवामा आबद्ध उनी दुई वर्षयता प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् । एफवान् सफ्ट ग्रुपका सञ्चालकसमेत रहेका सापकोटासँग डिजिटल भुक्तानीको समग्र अवस्थासहित कम्पनीका सम्बन्धमा हालै उत्पन्न विवादलगायत विविध पक्षमा रहेर सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले यतिबेला विश्वभर धेरै व्यवसाय ठप्प छन् तर सूचना–प्रविधिसँग सम्बन्धित जति पनि व्यवसाय छन् तिनीहरूका लागि नयाँ अवसरहरू खुला भए भनिन्छ । ई–सेवाको हकमा कोरोनाले अवसर थप्यो कि चुनौती ?
कोरोना भाइरसले यतिबेला सम्पूर्ण विश्व र मानवजातिलाई नै अप्ठेरो पारेको छ । सबैभन्दा पहिले मानवजातिकै संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने मुख्य सवाल हो भने व्यवसाय दोस्रो पाटो हो । व्यवसायमध्ये सूचना–प्रविधि क्षेत्रसँग जेजति व्यवसाय छन्, ती तुलनात्मक रूपमा कोरोनाबाट कम क्षति भएका हुन् । नेपालमा पनि लकडाउन भएको तीन महिना पुग्न लाग्यो । लकडाउन पहिलाको अवस्था र हालको अवस्था तुलना गर्दा कारोबारका हिसाबले हामी उही अवस्थामा छौँ । उही अवस्थामा यसकारण छौं कि हामीले भुक्तानी सेवा दिने हो, यसमा एउटा मुख्य सेगमेन्ट पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ । एयरलाइन्स, यातायात, ट्राभल, टिकेटिङका सबै काम बन्द छन् । हाम्रो रेभिन्यूमा ठूलो भूमिका खेल्ने पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुनुले असर अवश्य नै देखिने भयो । यसका साथै नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक टु बैंक ट्रान्जेक्सन निःशुल्क गर्न भनेको छ । त्यो नियम भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने सबैमा लागू हुन्छ । यस अर्थमा ट्रान्जेक्सन बढे पनि आय बढेको छैन । समग्रमा ट्राभल क्षेत्र नचलेका अवस्थामा पनि ट्रान्जेक्सनको हिसाबमा हामी पहिलेकै अवस्था छौं ।
ई–सेवाको व्यवसायमा ठूलो हिस्सा ओगटेको ट्राभल एन्ड टुर्स ठप्प हुँदा पनि ट्रान्जेक्सन लकडाउन अगाडिकै अवस्थामा राख्न कुन क्षेत्रले बढी भूमिका खेल्यो ?
लकडाउनको समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिल भुक्तानी ‘युटिलिटी बिल पेमेन्ट’ बढिरहेको छ । लडकाउनको समयमा मानिसहरू घरमै बस्नुपर्ने हुनाले टपअप बढेको छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुलको बिल पेमेन्ट यतिबेला घटेको छ । सरकारले नै लकडाउनका बेला छुट दिएका कारण यो घटेको हो, लकडाउन सकिनासाथ बढ्छ । जरिवाना लाग्दैन भने पनि अन्तिम मिति कुर्ने आममानिसको प्रवृत्ति नै हो ।
विगतको तुलनामा हालैका वर्षहरूमा बिजुलीको बिल, मोबाइल, टेलिफोनको बिल तिर्न तथा जहाजको टिकट काट्न बढी मात्रामा प्रयोग भएको डिजिटल कारोबार बढेको थियो । पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदमा पनि प्रयोग हुन थालेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिदमा पनि डिजिटल कारोबार हुन थालेकाले भविष्यमा यो रकम बढ्दै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ । डिजिटल कारोबार बढाउनकै लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो सेवा निःशुल्क दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । लकडाउनको समयमा ग्राहकले बैंकसँग आएर कारोबार गर्न अप्ठेरो हुने भन्दै बैंकहरूले ग्राहकको मोबाइल वा टेलिफोन नम्बरमा फोन नै गरेर डिजिटल बैंकिङ सिकाइरहेका छन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै बैंकले आफ्नै मोबाइल एपमार्फत पनि बैंकिङ कारोबार गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । हामीजस्ता भुक्तानी सेवाप्रदायकले पनि लकडाउनमा डिजिटल कारोबारमा सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ । यो समय नगद कारोबारबाट डिजिटलतर्फ आममानिसलाई रूपान्तरण गर्ने उपयुक्त अवसर हो ।
बिमाका क्षेत्रमा पनि ई–सेवामार्फत प्रिमियम तिर्न सकिने सुविधा ल्याउनुभएको छ । यसको दायरा कसरी अगाडि बढ्छ ?
हालसम्म १२ वटा जीवन बिमा कम्पनीसँग सहकार्य भएको छ । बाँकी कम्पनीहरूसँग पनि सहकार्य गर्न हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । कोभिडका कारणले केही ढिलो भएको हो, सहज हुनासाथ पुनः काम अगाडि बढ्छ । हामीले सुरुमा बैंकिङबाट सुरु गरेको हो । अहिले बजारमा डिजिटल बैंकिङ भनेर स्थापित भइसकेको छ । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, ई–सेवा जे भने पनि बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटल पेमेन्ट स्थापित भयो । बिमाको हकमा पनि डिजिटल पेमेन्ट भन्ने विषय निकै नयाँ हो । बिमामा परम्परागत तरिकाको एजेन्टमा आधारित व्यवसाय छ । यही परम्परागत शैलीबाटै यो व्यवसाय चलिरह्यो तर कोभिडले गर्दा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, भौतिक रूपमा उपस्थित भएर नगद वा चेक बुझाउन अप्ठेरो भयो । कोभिडले बिमामा डिजिटल पेमेन्ट गर्नुपर्ने एक किसिमको बाध्यता नै ल्यायो भन्दा हुन्छ । एजेन्ट र बिमा कम्पनीलाई डिजिटल पेमेन्टको महŒव कोभिडले बढायो । कारोबारका हिसाबले लकडाउन अगाडि र अहिलेको अवस्था बराबर हुनुमा बिमा पनि महŒवपूर्ण छ । ट्राभल व्यवसाय लकडाउनले ठप्प पा-यो भने बिमा व्यवसाय हाम्रो कारोबारमा बढ्यो । समग्रमा पहिले र अहिलेको अवस्था कारोबारमा बराबर भयो । यता ट्रान्जेक्सन फी मात्रै लिने हो, जुन निकै कम हुन्छ भने ट्राभलतर्फ प्रतिशतका आधारमा हुने हुँदा कारोबार त बढ्यो, तर आम्दानीका हिसाबले पहिलेको तुलनामा ५० प्रतिशत मात्रै हो । बिमामा अबको बाटो डिजिटल पेमेन्ट नै हो । यसमा नियामक निकायले सोच्नु जरुरी छ । अहिले डिजिटल बैंक परिचित भइसक्यो । यसैगरी बिमामा पनि डिजिटल टुलहरूको प्रयोग बढाउनुपर्छ । जनचेतना बढाउनु जरुरी छ । बिमितले आफ्नो नियमित बिमा शुल्क ई–सेवाको मोबाइल एप्स तथा इन्टरनेटबाट सहजै भुक्तानी गर्न सकिने वातावरण भएको छ । यस्तै ई–सेवा एकाउन्ट नभएका ग्राहकले ई–सेवाका देशभर रहेका कुनै पनि जोन प्वाइन्टमार्फत बिमा शुल्क भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
बिमा एजेन्टको भूमिका के हुन्छ ?
बजारको बुझाइ के छ भने अब एजेन्टको भूमिका नै हरायो भन्ने छ । यहाँनेर बुझाउन सकिएन भन्ने लाग्छ मलाई । आफै व्यवसाय गर्ने नभएर हामीले सहजीकरण मात्रै गर्ने हो । एजेन्ट र बिमा कम्पनीलाई हाम्रो च्यानलमा ल्याउने काम हाम्रो हो । बिमितलाई आफ्नो प्रिमियम तिर्न कम्पनीसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हामीले हटाउने हो । अहिले पनि इमेलमा कागजात पठाएर बिमा त भएको छ, तर भुक्तानी गर्न कम्पनीसम्मै आउनुपर्ने अवस्था छ । पेमेन्टको पाटो सहज होस् भनेर नै हाम्रो च्यानल प्रयोग गर्ने हो, न कि ई–सेवाले आफैं बिमा व्यवसाय गर्ने पनि होइन र एजेन्ट पनि बन्दैन ।
नेपालमा युवापुस्तामा नयाँ कुरा स्थापित गर्न सजिलो छ, तर डिजिटल पेमेन्टका प्रयोग सबैले गर्नु जरुरी छ । ग्राहकको ज्ञान, प्रविधिलाई छिटो आत्मसात् गर्न सक्ने क्षमता, नयाँ कुरामा विश्वास, इन्टरनेटको पहुँचलगायतमा विषय कत्तिको सहज छ ?
नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच समस्याको विषय होइन किनभने नेपाल टेलिकम, एनसेललगायतका आईएसपीहरूले काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो पटक डेटामै आधारित भएर टेलिकमले ठूलो लगानी फोरजीमा गरिरहेको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलले सहरी तथा सहरनिकट क्षेत्रमा फोरजी सेवा पु-याएका छन् । वल्र्डलिंक पनि गाउँगाउँमा पुगेको छ । विगतका दिनमा समस्या थियो तर अबको केही समयपछि इन्टरनेटको पहुँच अनलाइन पेमेन्टका लागि बोटलनेकका रूपमा रहन्न । ग्राहकको ज्ञानको कुरा गर्ने हो भने प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा छिटो चासो राख्ने प्रचलन छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा ७० लाखको हाराहारीमा भाइबर एकाउन्ट छन् । फेसबुक, भाइबर चलाउन जान्नेले ई–सेवा प्रयोग गर्न सक्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ । कुल जनसंख्याको आधार हेर्ने हो भने पनि ५० वर्षभन्दा कम उमेर समूह ८० प्रतिशत छ । म्यासेज मोडबाट पनि बेसिक युटिलिटी ट्रान्जेक्सन दिएका छौँ । अर्काे एजेन्ट एसिस्ट ट्रान्जेक्सन छ, १ लाखभन्दा धेरै ई–सेवाका एजेन्ट छन्, तिनीहरूले सहजीकरण गर्छन् । विश्वमा कोभिडको समस्या नदेखिएको प्रत्येक वडामा कम्तीमा १० वटा एजेन्ट हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले काम गरेका थियौँ । डिजिटल पेमेन्टलाई गाउँसम्म पु-याउन हामीले पनि सक्दो प्रयास गरेका छौँ भने बजार पनि तयार हुँदैछ ।
ई–सेवा जोन तथा ई–सेवा प्वाइन्टहरूको वृद्धिदर कस्तो छ ?
ई–सेवा जोन र ई–सेवा प्वाइन्ट हाम्रा लागि अत्यावश्यक छन् । हामीले फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन गर्ने हो, यसमा महŒवपूर्ण कुरा प्रविधिभन्दा पनि विश्वास हो । मानिसले ई–सेवामा राखेको पैसा सुरक्षित छ भन्ने विश्वास सबैभन्दा महŒवपूर्ण हुन्छ । एजेन्टले ई–सेवासँगको विश्वास व्यक्तिगत रूपमा ग्राहकसम्म ट्रान्सफर गर्ने हो । एजेन्टले प्रविधि सिकाउनुका साथै विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ । यसले गर्दा नेटवर्क विस्तार सहज हुन्छ । भोलिका दिनमा रेमिट्यान्स, माइक्रो लेन्डिङको समस्या पनि सहजीकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ । अहिले पनि १३ वटा पीएसपी आयो, ५ वटा पीएसओले लाइसेन्स पायो भनेपछि भुुक्तानीसँग सम्बन्धित १८-२० वटा इन्टिटी आइसके । यी सबैलाई काम गर्ने वातावरण छ त ? पाइपलाइन झन्डै १ सय वटा इन्टिटी छन्, तिनीहरू पनि आउँदा गर्ने काम के हो ? बिजुली र पानीको बिल तिरेरमात्रै त हुँदैन । अबको दायरा कता लैजाने हो, सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले लोकल बजारमा १ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाउँदा ३ सय ५० रुपैयाँ शुल्क छ । यसलाई डिजिटल च्यानल प्रयोग गरेर ३० रुपैयाँ झार्ने हो कि ४० रुपैयाँमा, त्यतातिर ध्यान पुग्नु जरुरी छ । माइक्रोफाइनान्सको कर्जामा १७-१८ प्रतिशतको ब्याजदर छ । हामीले प्रविधि प्रयोग गरेर त्यसलाई ९ प्रतिशतमा ल्याउन सक्छाँै कि ? त्यतातिर सोच्नुपर्ने समय आएको छ । बजारको वित्तीय भुक्तानीसँग सम्बन्धित आवश्यकतामध्ये कुन अहिलेको समस्या हो, त्यसलाई भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग जोडेर कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा नियामकले गृहकार्य गर्नु जरुरी छ ।
तपाईंले डिजिटल पेमेन्टको दायरा फराकिलो भयो भन्दै गर्दा सरकारी कारोबार त अहिले परम्परागत शैलीमै छ नि ?
सरकारको कर प्रणाली अहिलेसम्म भुक्तानी सेवाप्रदायकको पहुँचभन्दा बाहिर छ । निर्णायक तहमा बस्ने व्यक्तिले आवश्यक नठानेका कारण नै कर प्रणाली परम्परागत रूपमा चलेको हो । सरकारको राजस्व खाताको रकम हो, त्यो भरपर्दाे गराउन प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ । पेमेन्ट जति हुन्छ त्यसलाई रियल टाइममा बैंक खातामा आउने गराइयो भने त्यसका लागि ई–सेवा सक्षम छ । जुन बैंक खातामा राजस्व उठाएको हो, त्यही खातामा हामीले पु-याएपछि प्राविधिक रूपमा केही समस्या छैन । अर्काे कुरा रह्यो विश्वासको, रियल टाइममा खातामा रकम पुग्ने भएपछि यसमा पनि समस्या रहेन । यो चाहिने चिज हो, हामीलाई चाहिन्छ भनेर माइन्डसेट हुन नसकेको हो ।
यदि सरकारले कर प्रणालीलाई भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग जोडिन चाहने हो भने ७७ वटै जिल्लाबाट काम गर्न तयार छौँ । अहिलेको अवस्थामा ३२ लाख ग्राहक ई–सेवामा प्रत्यक्ष जोडिएका छन्, मोबाइल बैंकिङलाई समेत हेर्ने हो भने १ करोड १० लाख ग्राहक छन् । सम्पूर्ण डिजिटल च्यानलको कुरा गर्ने हो भने झन्डै डेढ करोड जनसंख्या छ । तीबाहेक १ लाख एजेन्ट छन् भने सबै गाउँपालिकामा हाम्रो उपस्थिति छ, अब सबै वडामा पुग्ने गरी काम भएको छ । नेटवर्क, क्षमता, पहुँच सबैका हिसाबले देशको ७७ वटै जिल्ला, प्रत्येक स्थानीय निकायबाट हामीले सेवा दिन सक्छौँ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ई–सेवा भुक्तानी पेमेन्ट सेवामा ग्राहकलाई के नयाँ दिन्छ ?
अहिलेसम्म ई–सेवाले युटिलिटी बिल पेमेन्टमा सहजीकरण ग-यो । आउने आर्थिक वर्षमा वित्तीय कारोबार गर्ने माध्यम ई–सेवा हो भन्ने कुरा स्थापित गर्छाैं । यसका लागि सबैजसो बैंकलाई हाम्रो नेटवर्कमा समावेश गरिसक्यौं । अबको फोकस एरिया बिमा र क्यापिटल मार्केट हो । यी कुरालाई समेटेर जाँदा वित्तीय बजारमा नेटवर्कका हिसाबले एक्सेसिएबल हुन्छ, त्यसपछि शिक्षा र आवश्यकता महसुस गराउनेतर्फ काम गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको आईटी विज्ञका रूपमा यसै कम्पनीबाट प्रतिनिधि छ, तर तपाईंले नियामक निकायले भुक्तानी पेमेन्टलाई सरकारी सेवामा आवश्यक ठानेन भन्नुहुन्छ, यो किन ?
प्रधानमन्त्रीको आईटी विज्ञका रूपमा हाम्रो कम्पनीकै अस्गर अलि हुनुहुन्छ । उहाँले यहाँ सिकेको कुरा सरकारी तवरबाट समग्र देशका लागि यस क्षेत्रमा के–कति परिवर्तन गराउन सकिन्छ, त्यसमा लाग्नुभएको छ । उहाँ विज्ञका रूपमा गइसकेपछि नै म ई–सेवाको प्रमुख कार्यकारीको भूमिकामा आएको हँु । यताको बिजनेस र उहाँको विज्ञको पद एक–अर्कामा पूर्ण रूपमा फरक छन् । विज्ञ भएर गइसकेपछि प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले बिजनेसमा सहभागिता छैन ।
सरकारले अगाडि सारेको डिजिटल नेपालको महŒवपूर्ण पाटो भनेको डिजिटल पेमेन्ट हो । हामीले सानो कम्पनीबाट सुरु गरेका भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनी अहिले उद्योग भएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न किराना पसलसँग फोन पेमा सहकार्य भएको छ । रेस्टुराँ, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा डिजिटल पेमेन्ट एसेन्ट हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो मोडलले काम गर्छ भन्ने कुरा बजारमा स्थापित गराएका छाँै ।
नेपालमा काम गर्न कठिन छ भनेर धेरै युवा विदेसिने प्रचलन नेपालका लागि नौलो होइन । झन्डै १ दशकको तपाईं अनुभवले के साँच्चै नेपालमा काम गर्न कठिन देख्नुभयो त ?
प्रविधिका क्षेत्रमा यही नीति र कानुनभित्र बसेर काम गर्ने भन्ने हुँदैन । आधारभूत कुरा गलत काम गर्नु भएन, ठग्न भएन भनेर काम सुरु गरियो भने राज्यले आवश्यकता ठानेमा नियमनको फ्रेमवर्कभित्र राख्दै जान्छ । नीतिगत व्यवस्था बन्दै जान्छ । यो नेपालको मात्रै नभएर संसारकै अभ्यास यस्तै हो । कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्दा पहिले नै नीति बन्छ भन्ने होइन, काम गर्दै जाने, सँगै सरकारले पनि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने, अनुगमन गर्ने पाटो छँदैछ । बजारमा धेरै युवा जमात छ । नयाँ तरिकाले काम गर्ने हो भने स्थापित हुन सजिलो छ । नेपालमा कपी गर्ने प्रचलन एकदमै बढ्दो छ, तर यसबाट अलि फरक तरिकाले आउने हो भने नेपालमा व्यवसाय गर्न सक्ने धेरै अवसर छ ।
भारतमा पनि आउटसोर्स बिजनेस एकदम माथि छ । कोभिडका कारणले भोलिका दिनमा वर्क फर्म होमको वातावरण बन्दै जाला । यसमा आईटीको प्रयोग बढाउन सक्ने अवसर छन् । शिक्षा, स्वाथ्य, रेमिट्यान्सलगायतका अन्य सेवाको डेलिभरीमा धेरै समस्या छन् । कहीं न कहीं एक्स्ट्रा शुल्क तिर्नुपरेको छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर लागत घटाउन सकियो भने सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुवैले लाभ पाउँछ । परम्परागत व्यवसायलाई नयाँ तरिकाले सोचेर काम गर्ने हो भने सबै क्षेत्रमा अवसर छ ।
पछिल्लो समय ई–सेवाका सम्बन्धमा केही विवादका विषयहरू पनि बाहिर आए, यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
आममानिस, मिडिया सबैले ई–सेवा र अस्गर अलिलाई फरक रूपले हेरिदिनुपर्छ । उहाँको कम्पनी हो, सबै डेटा चोरीदेखि विभिन्न खालका आरोप बेला–बेला लाग्ने गरेको छ । त्यो माइन्ड सेटबाट बाहिर आउनु जरुरी छ । ई–सेवा अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुमा अस्गर अलिको योगदान छ । आफ्नो व्यवसाय छोडेर डिजिटल नेपालको अभियानमा लाग्नु भनेको सरकारको सेवा डेलिभरी स्मुथ गराउन काम गरेको हो । यसलाई आममानिस र मिडियाले यसलाई बुझ्नुप-यो । जे कुरामा पनि ई–सेवा जोड्नु ठीक होइन । त्यसले गर्दा हामीलाई काम गर्न कठिन भएको छ । उहाँले गरेको काम र ई–सेवाले गरेको कामको मूल्यांकन फरक–फरक हुनुपर्छ । दुई वर्षदेखि उहाँले ई–सेवामा एउटा पनि काम गर्नुभएको छैन । आफ्नो जिम्मेवारी जे पाउनुभयो, त्यसमा लाग्नुभएको छ भोलिका दिनमा राम्रो-नराम्रो नतिजाले देखाउने नै छ । ई–सेवामा ४ सय कर्मचारी छन् र उनीहरूकै मेहनतले कम्पनी आजको अवस्थामा छ ।